Aostralô-melaneziana - Wikipedia
Ny Aostralô-melaneziana, izay atao hoe Aostralôida na Aostralaziana na Aostralômelanezôida koa, dia vondrona vahoaka miparitaka sady maro samihafa any Azia sy any Ôseania, araka ny fanakilasiana araka antrôpôlojia tamin' ny taonjato faha-19 sy faha-20, ary araka etnôlôjia. Isan' ny mamaritra ny toetr' izy ireo ny fomba fiainany ntaolontaolo sy ny volon-kodiny maloka (maintimainty hoditra), izay mampiavaka azy amin' ny mponina manodidina azy. Vahoaka samihafa izy ireo, na ara-batana izany, na ara-kolontsaina, nefa heverina fa miray fiaviana fahagola, avy amin' ireo andiam-pifidrà-monina voalohany tany Azia Atsimo sy tany Ôseania.
Lehilahy aostralôida any Aostralia
Anisan' ireo vahoaka voasokajy ho Aostralô-melaneziana ireo Veda any Srilanka, ny Negritô any Azia Atsimo-Atsinanana, ny Tompon-tanin' i Aostralia, ny Papoa any Ginea Vaovao ary ny Melaneziana any Melanezia. Indraindray koa dia ampidirina ao amin' io vondrona io ny Dravidiana ao amin' ny tapany atsimo amin' i India.
1 Any Azia Atsimo Atsinanana
1.1 Negritô any Andamàna
1.2 Negritô any Malezia
1.3 Negritô any Filipina
2 Any Ôseania
2.1 Tompon-tanin' i Aostralia
2.2 Melaneziana any Melanezia
2.3 Papoa any Ginea Vaovao
3 Ao amin' ny Zana-kôntinenta Indiana
3.1 Dravidiana any India
3.2 Veda ao Srilanka
Any Azia Atsimo AtsinananaHanova
Ny Negritô dia vahoaka mainty hoditra monina ao amin' ny faritra ara-jeôgrafia telo ao Azia Atsimo-Atsinanana, dia ny faritra misy ireo nosy Andamàna, ny Saikanosin' i Malezia (ahitana an' i Malezia, i Tailandy ary i Mianmara na Birmania) ary i Filipina.
Negritô any AndamànaHanova
Ireto ireo vahoaka negritô: ny Andamaney tompo-tany (Andamaney-Lehibe, Jaraoà, Ônga, Sentinely) ao amin' ireo nosy Andamàna.
Negritô any MaleziaHanova
Ny Negritô ao amin' ny Saikanosin' i Malezia, isan' izany ny Semanga (isany ny Bateka), ny Senôy, ny Manika (na Many) ao amin' ny tapany atsimon' i Tailandy.
Negritô any FilipinaHanova
Ny Aeta (ao amin' ny nosy Luzon), ny Aty sy ny Tomandôka (ao amin' ny nosy Panay), ny Batàka, ny Agta ao Sierra Madre, ny Sambala, ny Mamanoà ao amin' ny nosy Mindanaô ary foko hafa miisa eo anelanelan' ny 25 sy 34 ao Filipina.
Tompon-tanin' i AostraliaHanova
Ny Tompon-tanin' i Aostralia dia olona niaina tany Aostralia talohan' ny Eorôpeana.
Melaneziana any MelaneziaHanova
Ny Melaneziana dia vahoaka monina indrindra amin' ireo vondro-nosy mitambatra ao amin' i Melanezia, ao avaratra sy avaratra-atsinanan' i Aostralia, sy mahafaoka an' i Papoazia-Ginea-Vaovao sy an' i Kaledônia-Vaovao ary an' ireo vondro-nosy Solomon sy Vanuatu ary Fidji.
Papoa any Ginea VaovaoHanova
Ny Papoa dia vahoaka tompon-tany ao Ginea Vaovao, sy ao Melanezia, izay mitsinjara amin' i Ginea-Vaovao Andrefana. Ny mponina ao Ginea Vaovao dia ahitana foko madinidinika maro dia maro, izay samy manana ny kolontsainy sy ny fiteniny ary ny toetra ara-batany avy. Isan' ny vahoaka melaneziana izy ireo.
Ao amin' ny Zana-kôntinenta IndianaHanova
Dravidiana any IndiaHanova
Ny Dravidiana dia vahoaka tsy Ariana sy tsy Himalaiana any India, izay miteny dravidiana. Ny foko dravidiana maro anisa indrindra dia ny Telogo, ny Tamily (na Tamoly), ny Kanadiga ary ny Malaialy, izay mahatratra 30 hatramin' ny 70 tapitrisa isanisany. Misy koa ireo foko vitsy anisa izay mahatrara 1 hatramin' ny 5 tapitrisa isanisany any Pakistàna sy ao amin' ny faritra afovoan' i India.
Veda ao SrilankaHanova
Ny Veda dia vahoaka tompon-tany any Srilanka izay mifamatotra amin' ny Singaley amin' ny lafiny fiteny sy fivavahana.
Kaokazoida: Ariana - Semitika - Hamitika
Negrôida: Negrô - Kôikôy - Melaneziana - Negritô - Aostralôida
Môngôlôida: Môngôly Tavaratra - Sinoa sy Indôsinoa - Kôreana sy Japôney - Tibetàna sy Birmana (na Bama) - Maley - Pôlineziana - Maôry - Mikrôneziana - Eskimô sy Inoita - Tompon-tanin' i Amerika
Dravidiana sy Singaley
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Aostralô-melaneziana&oldid=1045736"
Dernière modification le 14 Jiona 2022, à 10:25
Voaova farany tamin'ny 14 Jiona 2022 amin'ny 10:25 ity pejy ity.